China Truss welding yi-engile mveliso kunye nabenzi | Honghua
Truss nge welding yi-engile
Iitrasi zensimbi zibhekisa kulwakhiwo lophahla olwenziwe ngentsimbi kwizakhiwo zorhwebo nezoluntu, ezinje ngemiqadi yendwe, iibhlorho kunye namasango e-hydraulic, njl.njl. Zonke iintlobo zeepylon, ezinje ngenqaba yemasti, inqaba kamabonakude kunye nenqanawa yomatshini wokuhambisa
Iitrasi zensimbi zibhekisa kulwakhiwo lophahla olwenziwe ngentsimbi kwizakhiwo zorhwebo nezoluntu, ezinje ngemiqadi yendwe, iibhlorho kunye namasango e-hydraulic, njl.njl. Zonke iintlobo zeepylon, ezinjenge-mast tower, i-tower tower kunye ne-transmission line tower, zihlala zisetyenziswa kwindawo yentsimbi ene-trusses ezintathu, ezine okanye ezininzi.
Iitrasi zensimbi zinokudityaniswa ngetsimbi, zibotshwe, zibotshwe okanye ziboshwe. I-Welding yeyona isetyenziswa kakhulu; Unxibelelwano oluqhelekileyo olubotshiweyo luqhele ukusetyenziswa kwizakhiwo ezisusekayo, iipylon kunye neenkqubo zenkxaso; Ukuqhagamshela okuboshwe ngamandla okuphezulu kuhlala kusetyenziselwa unxibelelwano lwendawo yezixhobo zentsimbi enzima. Ukuphakamisa itrasi yesinyithi enzima ethotyelwe kwimithwalo emikhulu enamandla itshintshwe ngokuthe ngcembe kukudityaniswa kwamandla kwe-bolt ephezulu.
Isakhiwo sentsimbi esiphakamileyo esiphakamileyo sokwakha ihotele / iofisi / indawo yokuthenga / indawo yokugcina izinto, umthwalo ophilayo kunye nomthwalo ofileyo unokulandela iimfuno zabathengi ukuyila nokubala. Kule projekthi, ukutyibilika kudityaniswe ngeplanga elenziwe ngentsimbi kunye neplin kunye nomgangatho wentsimbi kunye nekhonkrithi. Izinyuko zihlelwe ngokwecandelo H lekholam yentsimbi kunye nomqadi wentsimbi kunye neplate yensimbi yokukhangela. Sinikezela ngenkonzo yasimahla yokuhlohla ukufakwa e-China, kwaye ukwanelisa iimfuno zabathengi zokufakwa ngokukhawuleza, singathumela injineli kwindawo yeprojekthi yofakelo lwesikhokelo.
Ulwakhiwo lwesakhiwo sentsimbi lolunye uhlobo lwendlu esele yenziwe, zombini isakhelo sonke sentsimbi kunye nezinto zokufakelwa zizinto zonke zokugqiba, kubandakanya ukusika, ukubhola, ukubumba, indibano, i-welding, ukumelana nomhlwa, ukupeyinta kunye nokupakisha. Onke amalungu entsimbi aqhagamshelwe ngebhawudi okanye ngesiciko okanye ngepini, njl.
Isakhiwo sokugcina isinyithi lolunye uhlobo lwesakhiwo sensimbi. Iprojekthi yolwakhiwo lwentsimbi lulwakhiwo lwesizukulwana sesithathu. Idibanisa icandelo le-H kunye ne-c / z kwicandelo lesakhelo esinephepha lesinyithi okanye ipaneli yesandwich njenge-wal kunye nophahla. Ukwakhiwa kwesamente okuqinisiweyo ngokwesiko kwenziwe ngolu hlobo lokwakha kwiikhontrakthi eziphuhlisiweyo. Inezinto ezininzi ezigqwesileyo ezinje ngobunzima bokukhanya, ubude obukhulu, ukubuyiswa kancinci, ixabiso eliphantsi, isiseko esincinci, umjikelo wokwakha omfutshane, ukhuselekile, mhle, ect. Isetyenziswa ngokubanzi kwimizi-mveliso enye, kwindawo yokugcina izinto, ekwakheni ishishini, eofisini, kwiindawo zokupaka, kwindawo yokuhlala, kwisakhiwo esiphakamileyo esinezinto ezininzi njalo njalo.
Egqithileyo Truss nge welding yi ityhubhu yoxande
Okulandelayo: Ubume obukhethekileyo
Ikholamu yentsimbi yokuqengqeleka iRoller